Manome tanana ireo Syriana nafindra toerana ny Jordaniana na dia misisika hanidy ny sisintany aza ny governemanta · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Jolay 2018 5:35 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, Ελληνικά, Italiano, русский, 繁體中文, عربي, English
Tafasaraka vonjimaika tamin'ny fianakaviany any Syria i Marwan, 4 taona monja, ary ny ekipan'ny UNHCR no manampy azy hiampita any Jordan. Nivoaka tamin'ny fampahalalam-baovao via Twitter.
Tamin'ny fiandohan'ny volana Jolay 2018, manohy manafika ireo “mpikomy sisa tafajanona ao atsimon'i Syria” ny governemanta Syriana araka ny filazan'ny gazety Arabo mpivoaka isan-kerinandro. Natao ny daroka an'habakabaka goavana tao an-tanànan'i Daraa mba hanadiovana ireo tafika mpikomy tavela. Syriana 270.000 farafahakeliny no nandositra ny fanafihana an'habakabaka sy an-tanety nandritra ny roa herinandro lasa, araka ny filazan'ny Firenena Mikambana.
Namindra toerana ny atsasany mahery amin'ny mponina ny ady tao Syria, ny tranga farany dia tao Daraa izay namindra Syriana 300.000 mahery tao anatin'ny tapa-bolana monja. Nanaiky handray mpitsoa-ponenana 1,3 tapitrisa ny mpifanolo-bodirindrina aminy, Jordana nandritra ny fito taona lasa, saingy niteraka ny fandavan'ny governemanta vaovao tsy hanokatra ny sisintany intsony ny fihetsiketsehana vao haingana tao amin'ny firenena izay nitarika ny fametraham-pialan'ny governemanta teo aloha.
Na dia izany aza, tsy nanakana ny Jordaniana tsy hanolo-tanana ny Syriana ny fanakatonana sisintany.
Mangataka fanampiana amin'ireo olom-pirenena ireo FTMF (ONG) eo an-toerana ao Amman renivohitra mba hanamaivanana ny fahasahiranan'ireo Syriana nafindra toerana eo akaikin'ny tanàna sisintanin'i Al-Ramtha ao Jordana. Raha efa nisy talohan'ny nanombohan'ny krizy tao Syria ireo ONG sasany, natsangana vao haingana kosa ny hafa mba hiatrika ny firohotan'ireo Syriana nifindra toerana tombanana eo amin'ny 40.000 eo ao amin'ny sisintany.
Ohatra, miara-miasa amin'ny Komitin'ny Tontolo iainana ao Jordana ny FTMF (ONG) Eghathet Al-Malhoof (midika hoe “Manampy ireo Mila Fanampiana”) mba hanangona sy hizara fanomezana manerana ny sisintany. Tahaka izany koa, ny tetikasa Masar dia nanatevin-daharana ny ezaka nataon'ny UNHCR sy ireo fikambanana tsy miankina iraisam-pirenena hafa mitovy tanjona izay nahazo alalana hanao asa fanasoavana.
Nizara taratasy kely, nifandray tamin'ireo manampahefam-panjakana ireo fikambanana tsy miankina, ary nizara lahatsoratra tamin'ny alàlan'ny fampitam-baovao sosialy mba hangataka fanampiana isan-karazany, anisan'izany ny fitadiavana mpilatsaka an-tsitrapo sy fanangonana fanomezana. Ahitana toro-hevitra momba ny fanomezana sakafo azo hohanina, mangataka fanomezana sakafo ambifotsy, mofo, rano sy zava-pisotro amin'ny tavoahangy ny taratasy kely. Nanao antso hahazoana fanafody, fitaovana ara-pahasalamana sy fidiovana, tranolay ary fitaovana ho an'ny zazakely ihany koa izy ireo. Ekena ny fanomezana ara-bola, saingy aleon'ny FTMF (ONG) mandray fanomezana mivaingana mba hisorohana ny fahasarotana mifandraika amin'ny fikirakirana vola.
Osama Hajjaj, mpikambana ao amin'ny Tetikasa Masar, nilaza tamin'ny Global Voices (GV) fa ilaina ireo mpilatsaka an-tsitrapo ary ireo izay tsy afaka manampy mandritra ny tontolo andro dia tonga manampy aorian'ny asa fanaony andavanandro. Nanazava tamin'ny GV ny talen'ny Masar, Mohammed Al Garalleh fa nahafaly azy ny habetsaky ny fanampiana voaray hatramin'izao ary namaly teo noho eo avy hatrany ny fanehoan-kevitra tao amin'ny media sosialy. Nanambara ihany koa i Garalleh fa mitantana ny fizarana ireo fanomezana ny tafika Jordaniana ary tsy hanosi-bohontanana izay rehetra te-hanampy ny fikambanana.
Araka ny voalazan'i Eyad Al Jazzazeh, lehiben'ny Eghathet Al Malhoof, nahazo fanomezana marobe avy amin'ny olon-tsotra, ​​fikambanana, orinasa tsy miankina, sy mpandraharaha izy ireo.
Dokotera 250 mahery, mpitsabo mpanampy sy vondrona mpitsabo no nanolo-tena an-tsitrapo sy mipetraka anaty trano lay ao Al-Ramtha mba hanampy izay mitady fitsaboana, ankoatra ny fiantohana ny tsy fiparitahan'ny areti-mifindra na viriosy amin'ireo Syriana nafindra toerana ao amin'ny sisintany. Nisy ireo marary sasany nalefa any amin'ny hopitalm-panjakana Jordaniana.
Ankoatra ny firongatry ny fanampiana azo tsapain-tanana, tenirohy Twitter roa malaza #open_the_borders sy #we’ll_share_our_bread_in_half, no nanampy ny fanentanana hahazoana fanampiana sy fanohanana. Raha miady amin'ny fanambiny manokana i Jordan, mieritreritra ny Jordaniana maro fa tokony hiditra ao amin'ny firenena ireo Syriana nafindra toerana araka ny fanehoan-kevitry ny olom-pirenena vao haingana tao amin'ny Twitter:
Urge #Jordan to #OpenBorders to the people and to humanitarian aid 👇🏼 #افتحوا_الحدودhttps://t.co/FOxtq01gWj
Ity no fifindra-toerana lehibe indrindra tamin'ny ady Syriana. Tsy manana filàna fototra ho an'ny fivelomana ny olona.
Aza manilika an'i #Syria.
Manoratra momba an'i #Daraa.
Miresaha momba an'i Daraa.
Mandrisika an'i #Jordan mba hanokatra ny sisintany #OpenBorders ho an'ny olona sy ny fanampiana maha-olombelona 👇🏼 #افتحوا_الحدودhttps://t.co/FOxtq01gWj
From Idlib to Texas: “In solidarity with children in detention at the US border. Our hearts are with you.” pic.twitter.com/ApKvNWNQHV
— The Syria Campaign (@TheSyriaCmpgn) June 20, 2018
Tsy mahalala sisintany ny olombelona.
Hatrany Idlib ka hatrany Texas: “Ho firaisankina amin'ireo ankizy tazonina ao amin'ny sisintany amerikana. Any aminareo ny fonay.” pic.twitter.com/ApKvNWNQHV
“Aina an'arivony tsy manan-tsiny no ho very, indray, raha tsy misy fepetra maika raisina.”
Fanambaran'ny @RefugeesChief momba ny ady ao #Syria:
-Aina 750.000 no tandidonin-doza.
-320.000 no nafindra toerana + fepetra ratsy
-60.000 no monina amin'ny tranolay ao amin'ny sisintanin'i Jordanhttps://t.co/Vgc5MBEvpZ pic.twitter.com/FpqRSNoYrd
Jordana: fo misokatra, sisintany mihidy
Nandrisika an'i Jordania ny Firenena Mikambana (ONU) mba hanokatra ny sisintaniny, nilaza fa tsy manan-tsafidy hafa ireo Syriana nafindra toerana ary atahorana ny fiainan'izy ireo. Na dia izany aza, tsy manaiky lembenana amin'ny fanapahan-keviny i Jordana fa hanidy ny sisintany ihany, milaza amin'ny ONU mba hanome fiarovana ao Syria.
Iray volana monja talohan'ny fitokonana, nanambara i Jordana fa tsy afaka hanaiky mpitsoa-ponenana intsony.
Nِahatonga ny Jordaniana hilaza ireo fahoriana hafa, tahaka ny enta-mavesatry ny mpitsoa-ponenana ny fihetsiketsehana milamina vao haingana tamin'ny May 2018, izay nokarakarain'ireo sendikà noho ny lalàna vaovao fampiakarana hetra amin'ny karama. Nitarika ny fialàn'ny governemanta manontolo izany ary lasa mitandrina be hatrany momba ireo olana mikasika ny mpitsoa-ponenana ny governemanta vaovao, satria misy ireo olona sasany niezaka nanome tsiny azy ireo (mpitsoa-ponenana) ho fahavalom-pirenena.
Mahatsiaro “tsy manana adidy” hanokatra ny sisintany ny governemanta ankehitriny, satria any amin'ny 7 isanjato nandiso fanantenana ny tamin'ity taona ity ny fanohanana ny drafitra ho an'ny mpitsoa-ponenana (drafitra fiarahamiasa stratejika eo amin'i Jordana sy ny fiarahamonina iraisam-pirenena) sy tahaka ny valinteny tamin'ny taona 2017 izay nahatratra 65 isanjato.
Anisan'ireo mpanohana lehibe ny fitondrana Syriana i Rosia sy Iran, raha manohana ireo mpikomin'ny governemanta kosa i Etazonia, Torkia ary Arabia Saodita. Na izany aza, voalaza fa nandao azy ireo i Etazonia sy ireo mpiara dia hafa amin'ny mpikomy ary tsy mandefa fanampiana ho azy ireo intsony .
Amin'ny alalan'ny ambasadiny ao Amman, Jordana, nandefa hafatra ho an'ireo mpikomy ao atsimo i Etazonia, milaza azy ireo fa tsy tokony hanantena ny herin'ny tifitra Amerikana izy ireo.
Manirery tsy misy fanampiana ankehitriny ireo mpikomy ankehitriny, ary misara-kevitra amin'ny fiverenana ao an-tanàna mbola tsy afaka daroka baomba ka azo antoka ny fahafatesana sy ny miandry ao amin'ny sisintanin'i Israely sy Jordana ny sivily.